ခဈြခွငျးမတ်ေတာက လူတဈယောကျရဲ့ မကျြနှာကို ဘယျလို ပွောငျးလဲစကွေောငျး ပွသနတေဲ့ စမျးသပျမှုတဈခု - Lifestyle Myanmar
Home Relationship ခဈြခွငျးမတ်ေတာက လူတဈယောကျရဲ့ မကျြနှာကို ဘယျလို ပွောငျးလဲစကွေောငျး ပွသနတေဲ့ စမျးသပျမှုတဈခု
ခဈြခွငျးမတ်ေတာက လူတှအေပျေါ ဘယျလို သကျရောကျမှုရှိကွောငျး ပွသဖို့ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ Sentimente လို့ချေါတဲ့ dating site တဈခုက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဓါတျပုံပရောဂကျြတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ပါဝငျသူမြားကို စမျးသပျမှု မစတငျခငျမှာ ဓါတျပုံတှေ ရိုကျယူခဲ့ပွီး သူတို့တဈယောကျခငျြးစီအတှကျ ကိုယျရေးကိုယျတာ မကျဆခြေျ့ပါတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို ပွသခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ပါဝငျသူမြားကို ဒုတိယအကွိမျ ဓါတျပုံရိုကျခဲ့ပွီး ရလဒျတှကေို ကနဦးရိုကျခကျြတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့အကွားမှာ ဘယျလိုခွားနားခကျြတှေ ရှိခဲ့သလဲဆိုတာကို အောကျကပုံတှမှော မွငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒီဆောငျးပါးကို ဖတျပွီးရငျ သငျခဈြရသူတှကေို သတိရသှားမယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတာ ရုပျဝတ်တုပစ်စညျးလို ထငျသာမွငျသာရှိတဲ့ အရာအဖွဈ မွငျရဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဓါတျပုံဆရာMihnea Ratteက ဒီခံစားခကျြကို သူမရဲ့ဓါတျပုံတှမှော မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပါဝငျသူမြားကို ဓါတျပုံရိုကျဖို့ ဖိတျကွားခံခဲ့ရပွီး သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးပုံတူကို ရိုကျပွီးနောကျ သူတို့ခဈြတဲ့သူမြားက ငါမငျးကိုခဈြတယျလို့ ပွောနတေဲ့ ဗီဒီယိုတဈခု သို့မဟုတျ သူတို့ရဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို ပွသခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ စိတျခံစားမှုအားလုံးက စိတျရငျးမှနျနဲ့ ထှကျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
၁။ မိသားစုဆီက နှေးထှေးတဲ့ စကားကို ကွားခဲ့တဲ့ မျောနီကာ
၂။ Manuela ရဲ့ရညျးစားက သူမကိုခဈြကွောငျး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
၃။ အလကျဇန်ဒရားရဲ့ ရညျးစားက သူမအပျေါထားတဲ့ နကျရှိုငျးတဲ့ ခံစားခကျြမြား ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။
၄။ သူမအခဈြဆုံး သူငယျခငျြး ကလေးတှရေဲ့ message ဗီဒီယိုကို ကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ Raluca
၅။ Oana ကို သူမရဲ့ ခှေးကလေးနှငျ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို ပွသခဲ့ပါတယျ။
၆။ သူမရဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးဆီက ဗီဒီယိုမကျဆခြေျ့တဈခုရခဲ့တဲ့ Andreea
ခဈြခွငျးမတ်ေတာဟာ ဘကျပေါငျးစုံမှာ ရှိပွီး လူတဈဦးခငျြးစီက သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအဓိပ်ပာယျလေးတှေ ဖှငျ့ဆိုပေးခဲ့ကွပါတယျ။ လူတဈခြို့က သူတို့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ခဈြကွပါတယျ။ အခွားသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှမေပါဘဲ သူတို့ရဲ့ဘဝကို ယောငျလို့တောငျ စိတျမကူးကွပါဘူး။ ရငျခုနျစရာကောငျးတဲ့ အခဈြက အရမျးအစှမျးထကျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဘဝမှာကော ဘယျအရာက အဖိုးအတနျဆုံးလို့ ထငျပါသလဲ?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲစေကြောင်း ပြသနေတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက လူတွေအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ပြသဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Sentimente လို့ခေါ်တဲ့ dating site တစ်ခုက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံပရောဂျက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်သူများကို စမ်းသပ်မှု မစတင်ခင်မှာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ယူခဲ့ပြီး သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မက်ဆေ့ခ်ျပါတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပါဝင်သူများကို ဒုတိယအကြိမ် ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီး ရလဒ်တွေကို ကနဦးရိုက်ချက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အကြားမှာ ဘယ်လိုခြားနားချက်တွေ ရှိခဲ့သလဲဆိုတာကို အောက်ကပုံတွေမှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးရင် သင်ချစ်ရသူတွေကို သတိရသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းလို ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ အရာအဖြစ် မြင်ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံဆရာMihnea Ratteက ဒီခံစားချက်ကို သူမရဲ့ဓါတ်ပုံတွေမှာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်သူများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီး သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးပုံတူကို ရိုက်ပြီးနောက် သူတို့ချစ်တဲ့သူများက ငါမင်းကိုချစ်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအားလုံးက စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ထွက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁။ မိသားစုဆီက နွေးထွေးတဲ့ စကားကို ကြားခဲ့တဲ့ မော်နီကာ
၂။ Manuela ရဲ့ရည်းစားက သူမကိုချစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
၃။ အလက်ဇန္ဒရားရဲ့ ရည်းစားက သူမအပေါ်ထားတဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ ခံစားချက်များ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
၄။ သူမအချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ကလေးတွေရဲ့ message ဗီဒီယိုကို ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Raluca
၅။ Oana ကို သူမရဲ့ ခွေးကလေးနှင့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
၆။ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းဆီက ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုရခဲ့တဲ့ Andreea
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ ရှိပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေ ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ လူတစ်ချို့က သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်ကြပါတယ်။ အခြားသူတွေက သူတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေမပါဘဲ သူတို့ရဲ့ဘဝကို ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးကြပါဘူး။ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်က အရမ်းအစွမ်းထက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝမှာကော ဘယ်အရာက အဖိုးအတန်ဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ?
Previous articleလလေ့ာမှုတဈခုအရ သငျ့အိမျထဲက လဟော အပွငျဘကျက လထေကျ ဘာကွောငျ့ ပိုညဈညမျးရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး
Next articleသူမုနျးတဲ့ အဝတျအစားတှနေဲ့ ဖကျရှငျဘလော့တဈခုဖှငျ့ပွီး ရညျးစားဖွဈသူကို Troll ခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး